तेस्रो त्रैमासमा बोटलर्स नेपालका दुबै कम्पनीको नाफामा वृद्धि
वैशाख २८, काठमाडौं । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बोटलर्स नेपाल तराई र बालाजुको नाफामा वृद्धि भएको छ ।
बोटलर्स नेपाल तराईले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ३ करोड २६ लाख ३५ हजार नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ३७ करोड १४ लाख २७ हजार पुरयाएको छ ।
त्यसैगरी बोटलर्स नेपाल बालाजुले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. २९ करोड ४६ लाख २२ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा उक्त कम्पनी रू.१ करोड ८० लाख नोक्सानीमा थियो ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा दुबै कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बोटलर्स बालाजुको सञ्चालन आम्दानी ११ प्रतिशत र तराईको १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी सो अवधिमा ती दुबै कम्पनीको विक्री आम्दानी भने ऋणात्मक देखिएको छ । विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड- १९ को असर ती कम्पनीमा पनि देखिएको छ । बोटलर्स नेपाल तराईको विक्री आम्दानी रू. २ अर्ब ८९ करोड २ लाख ऋणात्मक रहेको छ ।
कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ३ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ४ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २७ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू.३०७ पुगेको हो । उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.२ हजार ११७ रहेको छ । चुक्तापूँजी रू.१२ करोड १० लाख रहेको कम्पनीले जगेडामा रू. २ अर्ब ४४ करोड ७ लाख सञ्चित गरेको छ ।
त्यसैगरी बोटलर्स नेपाल बालाजुको सञ्चालन नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ५ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ६ अर्ब १९ करोड २४ लाख ७० हजार पुगेको छ । उक्त कम्पनीको विक्री आम्दानी चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ऋणात्मक रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १४ ऋणात्मक रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा सुधारिएर रू. १३४ पुगेको छ । नाफामा वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि भएको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ हजार ७९ रहेको छ ।